यसकारण नियमित यौनसम्पर्क स्वास्थ्यका लागि फाइदा जनक » खबरहरुको एउटै केन्द्र
यसकारण नियमित यौनसम्पर्क स्वास्थ्यका लागि फाइदा जनक
बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ १६:२७ मा प्रकाशित !
एजेन्सी । नियममित रुपमा प्राकृतिक यौनसम्पर्क गर्ने जोडीको स्वास्थ्य राम्रो हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । इटालीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको एक अनुसन्धानले नियमीत रुपमा यौनसम्पर्क गर्ने पुरुषहरुको शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि तथा महिलाको शरीरलाई पनि लाभ हुने देखाएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार नियमित यौन सम्पर्क गर्ने पुरुषको टेस्टोस्टेरोनको मात्रा बढ्छ । यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुको साथै मुटु सम्बन्धी रोग लाग्नमा समेत कम गर्छ । नियमित यौन सम्पर्कबाट महिलाहरुमा पनि उत्तिकै फाइदा गर्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव मधुमेहका विरामीहरुमा समेत परेको बताएका अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्श छ ।
तर अनुसन्धानकर्ताहरुले यौनसम्पर्क गर्दा पाटनरबीचको समझदारीलाई भने मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले यदि यौनसम्र्कमा कुनै पाटनरको चाहनाविपरीत हो भने त्यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर पु¥याउने बताइएको छ । नियमित यौनसम्पर्कले पुरुषलाई शारीरिक र मानसिक लाभ पुग्छ तर यसका लागि दुवै अर्थात पुरुष महिला यौनप्रति इमानदार रहनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको राय छ ।
नियमित यौनसम्बन्धले शुक्रकिटको गुणस्तरमा समेत सुधार हुनुका साथै प्रजनन क्षमता समेत बृद्धि हुन्छ । अस्टेलियाली बैज्ञानिकद्धारा सन् २००७ मा गरिएको एक अध्ययनले देखाएअनुसार धेरैजसो पुरुषमा हुने शुक्रकिटको डिएनएमा हुने क्षतिलाई नियमित यौन सम्पर्कले हटाउने तथा रक्तचाप नियन्त्रण गर्न र मोटोपना नियन्त्रण गर्न समेत सहयोगी हुने देखिएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रदेश न: ५,मानव जातीको कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत प्रथालाई अन्त्य गरिन्छ :मन्त्रि बराल
NEXT POST Next post: स्पेनिस ला लिगामा मड्रिड र बिल्बाओ बीच बराबरी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ १६:२७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ १६:२७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ १६:२७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ १६:२७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख ६, २०७५ १६:२७